စိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုသူခိုးမဖြစ် - သတင်း Rule
သငျသညျအစဉျအမွဲကြုံတွေ့ဖူး စိုးရိမ်ခြင်း? ငါထဲကဆိုတှနျ့ဆုတျမညျမဟုတျ 100 စစ်တမ်းကောက်ယူအရွယ်ရောက်ပြီး, အားလုံး 100 သူတို့စိုးရိမ်ပူပန်မှုအချို့ကိုပုံစံကိုကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ကြသငျသညျပွောမညျ.
စိုးရိမ်ပူပန်မှုကျွန်ုပ်တို့၏ဖြစ်တည်မှု၏ပုံမှန်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ယောက်ျား၏အစောပိုင်းနှစ်များတွင်, စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့် adrenalin အန္တရာယ်ချဉ်းကပ်ဖို့တပ်လှန့်ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်တာဝန်ထမ်းဆောင်. ဒီအသကျရှငျကျွန်တော်တို့ကိုထားရှိမည်. ယနေ့တွင်, ကျွန်တော်တို့ကိုအများတို့သည်လည်းခံစားရကြောင်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုအစဉ်အဆက်နေ့စဉ်တာဝန်ဝတ္တရားနှင့်ထိုတာဝန်များကိုဂရုစိုက်ရန်မရရှိနိုင်အချိန်ပမာဏကိုမရှိတိုးတိုးမြှင့်ဖို့တုန့်ပြန်၌ရှိ၏.
လူအချို့, သို့သော်, စိုးရိမ်ပူပန်မှု၏တစ်ဝေးပိုမိုဆိုးရွားခွအေနအေတွေ့ကြုံ. စိုးရိမ်ပူပန်မှုတိုက်ခိုက်မှုများ, သို့မဟုတ် ထိတ်လန့်တိုက်ခိုက်မှုတွေ, သူတို့မကြာခဏရည်ညွှန်းကြသည်အဖြစ်, ပုံမှန်အားဖြင့်တော့လုပ်ငန်းလည်ပတ်သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်၏လုယက်တစ်ဦးချင်းစီ.
ကြောက်လန့် သူတို့စိတ်ဝိညာဉ်မျးစား, စဉ်းစားရန်၎င်းတို့၏စွမ်းရည် numbing နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းစဉ်းစား. သူတို့ကပင်ကြိမ်မှာအသက်ရှူဖို့ကြောက်လန့်ခြင်းနှင့်သာမန်အားဖြင့်အသက်ရှုဖို့တစ်ခါတစ်ရံနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း.
ဒါက debilitating အခြေအနေဖြစ်ပါသည်. သငျသညျကွောကျရှံ့ခွငျးနှင့်ထိတ်လန့်အားဖြင့်မြိ်ု့ခံစဉျးစားကွညျ့နိုငျပါ, သငျသညျကိုပင်ကုန်စုံစတိုးဆိုင်မှရိုးရှင်းတဲ့ခရီးစဉ်ပွီးမွောကျနိုင်ဘူးသောအချက်မှ? ဒါဟာအများအပြားအရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ်ဦးနေ့စဉ်အခြေအနေ.
အထိတ်တလန်ဒဏ်ခတ်တော်တစ်ဦးချင်းအားဖြင့်ရင်ဆိုင်အကြီးမြတ်ဆုံးအကြပ်အတည်းကိုအထီးကျန်အများအပြားခံစားသည်, နှင့်နိုင်ခြင်းအကူအညီတောင်းတစ်စုံတစ်ဦးမှထွက်ရောက်ရန်. ရောဂါ၏အလွန်သဘာဝလူနာအထီးကျန်ဖြစ်အောင်, နှင့်ကုသမှုရွေးချယ်စရာလည်းမရှိခဲ့ချေထင်ရစေသည်. ကုသမှုဖို့မရှာသူတို့ရဲ့အိမ်ရဲ့နှစ်သိမ့်ဇုန်ပြင်ပမှာတည်ရှိနေခဲ့ရသည်ဟုဆိုလိုပေသည်, သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အိပ်ခန်း.
မကြာခဏဆိုသလိုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပြင်းထန်စွာစိုးရိမ်ပူပန်မှုသို့မဟုတ်ထိတ်လန့်အပေါ်ကိုရောက်စေကြောင်းခွအေနမြေားကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်, နှင့်ထိတ်လန့်ဖြစ်စေတဲ့အခြေအနေများပြေလည်သို့မဟုတ်ငျ့သှားကြသည်တခါ, ဒါကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်တတ်. ငါသည်သင်တို့ကိုသင့်တစျခုလုံးကိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူဘဝကိုဖြတ်သန်းသွားနိုင်မယုံကြည်ကြဘူး, နှင့်ကြီးထွားစိုးရိမ်ပူပန်မှုအချို့ကိုပုံစံကိုတွေ့ကြုံခံစားဘယ်တော့မှ.
သငျသညျတာဝနျမြားရှိပါက, ကလေးများ, ချစ်ရသူ, နှင့်မိတ်ဆွေများ, ဖြစ်နိုင်သငျသညျပြင်းထန်တဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုခံစားရစေတဲ့အခွအေနေဖြစ်ရှိသွား. အချို့လူများကတစ်ဦးတိုက်ခိုက်တွေ့ကြုံခံစားဘယ်တော့မှ. သို့သော်များစွာသောပြုပါ, ထိုလူများအတွက်, တကခဏပါပဲ. သို့သော်ရှိသမျှသောတစ်ချိန်ကနေ, တစ်စုံတစ်ဦးကစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ထိတ်လန့်တွေ့ကြုံ, ထိုသို့သူတို့ကိုအတွင်း၌ကြီးထွားဖို့အစပြု.
ဒါဟာသူတို့ရဲ့ဘဝစားသုံး. ဤလူအဘို့, ရိုးရှင်းသောတာဝန်များကိုကြောက်စရာအခြေအနေများဖြစ်လာ.
သတငျးကောငျး, တကယ်တော့ကိုသာတောက်တောက်အစက်အပြောက်ငါကြည့်ရှုနိုင်, ဤရောဂါအတွက်, ထိုသို့အကြံပေးခြင်းများနှင့်တရားအားထုတ်ခြင်းအပါအဝင် Self-အကူအညီနဲ့နည်းစနစ်များအသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူအလွယ်တကူကု သ. တစ်ခွအေနအေဖြစ်ပါတယ်, ပျော့ဆေး, နှင့်ဇီဝကမ္မထိန်းချုပ်ခြင်း.
တစ်ဦးချင်းသူတို့ဘဝတွေကိုထိန်းချုပ်၌ရှိကြ၏ခံစားရရန်အစပြုပြီးတာနဲ့, နောက်တဖန်, သငျသညျလွှမ်းမိုးသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ထိတ်လန့်ဒီ့ထက်ပိုပြီးတောင်မှပင်ပိုမိုနီးကပ်စွာများမှာ.
ဤရောဂါ၏စတင်ခြင်းဟာသူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝကိုထိန်းချုပ်ဖို့သူတို့ရဲ့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းအတွက်တစ်ဦးချင်းစီအပေါ်ယုံကြည်မှုကပိုဆိုးလာသည်ကတည်းက, ထိန်းချုပ်မှု reestablishing လုံးဝလိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်.
35182	1 စိုးရိမ်ခြင်း, စိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါ, ဖရိုဖရဲ, ကြောက်လန့်, ကျန်းမာခြင်း, စိတ်ကျန်းမာရေး, ထိတ်လန့်တိုက်ခိုက်, လက္ခဏာ
← Google Glass ကိုအကြောင်းလူကြိုက်များဒဏ္ဍာရီ debunks လေလံတင်ရောင်းချခဲ့ NASA ရဲ့လမစ်ရှင်မှကင်မရာ →